အကြမ်းခံနိုင်တာတွေထက် ပိုမို အကြမ်းခံတဲ့အရာတစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ထူးခြားပြီး အရည်အသွေးမြင့် နည့်ပညာ ဒီဇိုင်းသစ်တွေ နဲ့ ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ထား လို့ Ford Ranger ဆီမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရသ တစ်ခု ကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် Ford Ranger မှာ မြန်မာနို်င်ငံရဲ့ ရေမြေသဘာဝ နဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ နည်းပညာ အများအပြား ပါရှိထားပါသေးတယ်။
Ranger အသစ်ကို ရေအနက် ၈ဝဝ မီလီမီတာ အထိ မောင်းနှင်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အရင် မော်ဒယ် တွေထက်စာရင် Ranger အသစ် ကအတွင်းခန်းပိုမို ကျယ်ပြန့်လာတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်Ford Ranger ရဲ့ အတွင်းခန်းဟာဆိုရင် (၂) ဆ ပိုမိုကျယ်ဝန်းပါတယ်။ နေရာဒေသမရွေး အလွယ်တကူ ရုန်းကန်မောင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက် Diesel Engine ကို Turbo-Charged တပ်ဆင်ပေးထားသည့်အပြင် High-way ခရီးအတွက် အင်မတန် သင့်တော်မဲ့ ကားတစ်စီးအဖြစ် Ford Ranger ကို သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကားအောက်ပိုင်း တည်ဆောက်ထားပုံက အကြမ်းခံလွန်းအားကြီးတာကြောင့် မြို့တွင်း မြို့ပြင် သွားလာနိုင်သည့်အပြင် တောလမ်းခရီး ထိတိုင်အောင် အလွယ်တကူ သွားလာနိုင်မှာပါ။ အလေးချိန် 3,500 kg အရာဝထ္တု တစ်ခုကို ရေ အနက် ထဲထိပင် ဆွဲယူနိုင်အောင် အင်ဂျင် နဲ့ Suspension ကို အချိုးကျကျ ပေါင်းစပ် ထားလို့ ဝန်ပိုတင်ဖို့အတွက် စိုးရိမ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒီဇိုင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည် Ford Ranger အသစ်မှာ အတွင်းခန်းလှပ သပ်ရပ်သည့်အပြင် ကားအတွင်းခန်း နည်းပညာအသစ် အများပြားပါရှိပါတယ်။ ဒါ့ထက် မျိုးဆက်သစ် Ford Ranger အသစ်မှာ Electronic ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမဲ့ 230V နှင် 110V အားရှိ အင်ဗာတာ ပါရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အရှေ့ဘက် ထိုင်ခုံ(၂)ခုံကြားတွင် ရှိသည့် သေတ္တာ အငယ်လေးဟာလည်း Laptop တစ်လုံး ဝင်ဆံ့သည်အထိ ကျယ်ဝန်းမှုရှိပါတယ်။ လူငယ်တွေ နှစ်ခြိုက်စေမဲ့ အချက်ကတော့ ညဘက်တွင် အတွင်းခန်း၌ အလိုအလျောက် လင်းသည့် မီးအရောင်ကို အရောင် (၇)မျိုး ပြောင်းလဲနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းထားလို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Audio System ကရော..?
Ford Ranger မှာ ပါဝင်တဲ့ ၄.၂လက်မ အရွယ်စား မျက်နှာပြင် Audio System လေးကလည်း ယာဉ်မောင်းနေစဉ်အတွင်း စမတ်ကျကျ အသုံးပြုနိုင်အောင် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ USB တပ်ဆင်ထားရှိပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ Message ပေးပို့ခြင်း တို့ကို Hands Free ပြုလုပ်နို်င်မည့်အပြင် မျက်နှာပြင် နှစ်ခြမ်းပိုင်းပြီး စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲ ကြည့်ရှုနိုင်ဦးမှာပါ။
လောင်စာသုံးစွဲနှုန်းလျော့ချ ပေးနိုင်သည့် အင်ဂျင်ပါဝါအမျိုးစားတွေကို Ford Ranger မှာ အသုံးပြုလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ 5-Speed Manual ဆိုရင် I4. 2.2L, နဲ့ 6-Speed I4. 2.2L ကိုတော့ Manual ရော Automatic ပါရရှိနိုင်မှာပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် Engine power ကြီးကြီး နဲ့ မောင်းနှင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ I5. 3.2L တို့ကို Diesel engine တွေ နဲ့ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် မလိုအပ်သည့်အချိန်တွင် လောင်စာမကုန်ဆုံးစေရန်အတွက် အလိုလျောက် Engine ဖွင့်ပိတ်စနစ်မှ စက်သတ်ပေးပါလိမ်မယ်။
အမေရိကား မှာဆိုရင် Ranger ကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဆုံးသော Truck အမျိုးစားအဖြင့် Truck Category ထဲမှာထည့်သွင်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ နေရာမရွေးကားရပ်လို့လွယ်ကူစေရန် နောက်ကြည့် camera တွေအပြင် ကားအနောက်ဖက် လုံခြုံမှု ရှိစေရန် Sensor များကိုလည်း တပ်ဆင်ထားရှိပါတယ်။ အချိန်မရွေး လေးဘီးလုံး လေပေါင်ချိန် စစ်ဆေးနိုင်သည့် Tyre Pressure Monitoring System နဲ့ အခြားသော လုံခြုံရေးနည်းပညာများဖြစ်သည့် Trailer Sway Control (အလေးချိန် 3500 kg အထက် ဆွဲရသောအခါ အတည်ငြိမ်ဆုံးထိန်းချုပ်စနစ်)၊ Traction Control (ဘီးချော်ခြင်း မဖြစ်စေသည့်စနစ်)၊ Adaptive Load Control ( ပစ္စည်းတငေ်ဆာင်သည့်အခါ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားနှင့် Ranger ကို လိုအပ်သလို ထိန်းညှိပေးသည့်စနစ်)၊ Emergency Brake Assist တို့ပါရှိထားလို့ မတော်တဆဖြစ်မှုတွေမှ အကောင်းမွန်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အတွင်းခန်းတစ်ခုလုံးကို air bags (၆) လုံး နဲ့ အပြည့်ဝ ကာကွယ် တပ်ဆင်ထားရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ Ford Ranger တွေက အမျိုးစား (၃)မျိုးနဲ့ ဝင်ရောက်လာတာပါ။ Double Cab, Rap Cab, Regular Cab ဆိုပြီး Grade (၃) မျိုး နဲ့ အားသာချက်ကိုယ်စီ ရှိထားကြပါတယ်။
Ford Ranger SIngle Cab XL ဆိုလျှင် USD 22,750 မှစတင်ပြီး
Ford Ranger RAP Cab XL ဆိုလျှင်တော့ USD 26,500 မှစတင်ကာ
Ford Ranger Double Cab XLT ဆိုလျှင် USD 37,500 မှ တန်ဖိုးစတင် သတ်မှတ်ကာ ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
ဒီကားအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိလိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သွားရောက်ကြည့်ရှုလိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဈေးနှုန်း သိချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန် Showroom လိပ်စာ – အမှတ် ၃၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်း – 01 521 959
မန္တလေး Showroom လိပ်စာ – အမှတ် ၅၅၊ ၇၈ လမ်း နဲ့ ၁ဝ လမ်းကြား၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့
ဖုန်း – 02 56 014, 02 56 015, 02 56 016, 02 56 017, 02 56 018
ထို့အပြင် အတွင်းခန်းပုံများပါဝင်သည့် ပုံအပြည့်အစုံကိုလေ့လာချင်သူများ၊
အချက်အလက် အပြည့်အစုံကိုလေ့လာချင်သူများအနေဖြင့် –
ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း စလစ်ကပ် တင်သွင်းယာဉ်များအတွက် ကညန အခွန် ကောက်ခံခြင်း လွှဲမှားနေ